Dr, Abdi Shire Ciyaar-Jecel oo isu soo sharaxay booski raisu-wasaare Saacid banneeyay |
Dr, Abdi Shire Ciyaar Jecel oo ah kabiirka kooxda qeyladhaan islamarkaana kamid ah aqoonyahanada dadaalka ugu jira inay kusoo baxan xilka Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa uu maanta ka hadlay haddii uu kusoo baxo mid ka mid ah xilalka ugu sareeya dalka waxa uu ummada u qaban lahaa.
Wareysi uu maanta Dr, Abdi Shire Ciyaar Jecel uu siiyey warbaahinta oo ku booqatay Hotelka uu ka degan yahay Muqdisho ayuu uga horeyn waxaa uu kooxda Qeylodhaan iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey sanadguuradii afaraad oo kasoo wareegtay markii la aasaasay kooxdan qeylodhaan oo ka dhalatay qarixii hotel Shaamow ee Muqdisho.
” Waan ku dhawahay Kismaayo24.com waana idin soo dhaweynayaa. Waxaan shacabka iyo kooxda Qeylodhaanba leeyahay hambalyo maadaama ay sanadguuradii afaraad u buuxsantay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay in aan maanta joogo Muqdisho oo ah halkii qaraxa Shaamow uu ka dhacay” ayuu yiri Dr, Abdi Shire Ciyaar Jecel.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay inuu booqasho ugu tagay jaamacadaha ay dhiganayaan ardaydii qaraxaasi lala eegtay iyo qaarka mid ah waalidiintii xitaa carurtooda ku waayey qaraxaasi. Isagoona intaasi ku daray inuu maanta ku faraxsan yahay arday xilligaasi qallin-jabineysay oo dhaqaatiir ah oo shaqeeya.
” Waxaan booqday Hotel Shaamow iyo jaamacadaha ay ardaydii xilligaasi qaraxa lala eegtay ay wali dhigtaan, waxaana si gaar ah ii farxadgelisay markii ay iisheegeen inay geesinimo kasii qaadeen heesta Qeyladhaan Waawareey oo kooxdanba ay ku dhisantay” ayuu yiri Dr, Abdi Shire.
Wariye Ahmednuur Maxamed oo wareysiga la yeeshay Dr, Abdi Shire Ciyaar Jecel ayaa waxaa uu wax ka weydiiyey isbadelka dalka ka dhacay iyo sida uu u arko. Waxaana uu sheegay inuu soo dhaweynayo isbadelkasta oo dalka wax u tari kara, balse uusan soo dhaweyneyn isbadel dhibaato wata.
” Ummada wixii ay qabto ayaan la qabaa. Waxaana dhihi karaa isbadel khayr qaba haddii uu yahay waan soo dhaweynayaa,haddiise uu mud dhibkiisa wata yahay hadde soo dhaweyn uma hayo” ayuu yiri Abwaanka.
Mar si toos ah loo weydiiyey hankiisa siyaasada iyo inuu diyaar u yahay inuu xil sare ka qabanayo dowlada hadda jirta ayuu ka hadlay, waxaana uu sii dabadhigay haddii uu xilkaasi helo waxa uu qaban lahaa.
” Waan filayaa inay dadka qaar leeyihiin Abdi Shire waa abwaan ee maxaa ka galay siyaasada. Waxaanse u sheegayaa kuwa sidaasi leh aqoon ayeysa ii laheyn. Aniga nin aqoonyahan ah oo waxbartay ayaan ahay, mase ku faano sida dadka qaarkiis ay sameeyaan. Haddiise gabayga iyo siyaasada ay isku diidayaan, waxaan leeyahay boqorka sacuudiga laftiisa waa gabyaa wadankana waa u taliyaa la socda” ayuu yiri Dr, Abdi Shire oo intaasi ku daray.
” Waxaan halkan u imid in aan ka qeybgalo isbadelada dhacaya taasi oo ay igu riixayaan saaxiibo badan, waxaana sheegayaa in aan diyaar u ahay in aan xilkasta ka qabto dalka Soomaaliya. Madaxweyne booskiis hadda ma banaana oo Xasan Shiikh ayaa ku fadhiya laakiin xilal kale oo aan hiigsanayo ayaa jira, marka aan qabto hala gaaro” ayuu yiri Dr, Abdi Shire oo ah kabiirka kooxda Qeylodhaan.
Ugu danbeyntii waxaa uu ugu baaqay qurba joogta inay dalka dib ugu soo noqdaan oo ay maalgashtaan, isagoona tusaale usoo qaatay hotelka uu degan yahay oo ay shaqo ka heleen 50 qof oo Muqdisho shaqo la’aan awal ku heysay. Waxaana uu sidoo kale sheegay inuu dhawaan booqday xeebta Jazeera oo uu carur iyo dad kale kula soo kulmay waqtina kula soo qaatay.